Dambiile Jwxo-shiil iyo Beeshiisa oo ay Talo ku Waraahsatay!! – Rasaasa News
Mar 1, 2010 dambiile, iyo Beeshiisa, Jwxo-shiil, ku Waraahsatay!!, oo ay Talo
Jwxo-shiil oo ay la Taliyeyaashii iyo maal galiyeyaashii Beeshiisa ahaa talo ugu geeyeen in uu kooxdiisa Ooda u Rogo. Hadii uu taladdooda diidana ay ku adkaysanayaan in ayna dib oo dambe u taageeraynin hantida ay u hayaana ay ka samrin doonaan.
Warar aanu ka helay Caasmar ayaa sheegaya in rag ka socda beesha Jwxo-shiil, oo u badan maalgaliyeyaashiisii iyo la taliyeyaashiisii ay muddo hal todobaad ah talo ugu tageen Jwxo-shiil oo isagu ku go,odoonsan Eritrea. Jwxo-shiil, ayaan baryihii ugu dambeeyey wax xidhiidh ah cidnaba la yeelan marka laga reebo raga ay xigtada yihiin ee ay xisaabta lacageed ka dhaxayso.
Jwxo-shiil, oo lagu tiriyo dadka ugu hantida roon ee ka xoolaystay ururka ONLF, intii uu masuulka ka ahaa, ka gadaalna noqday “dhargaa waalan dhadhanshaana kaba daran,” ayaa masuul doonimo ku galay dambiyo dil ah. Jwxo-shiil hantida la ogg yahay ee uu maanta ku lee yahay shirkadaha xawaaladaha, ayaa waxay dhantahay US$3,000, 000. Waxaana lacagahan u maamula masuulna uga ah Mustafe iyo Cabdala Afwaranle oo labadooduba degan dalka Emeraatka, taladiisana xoog ku leh.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan waxaa dhawaan gaadhay magaalada Caasmara ee dalka Eritrea, saddex nin oo ay ku jiraan labadani, oo ka tagay Emeraadka iyo ninka saddexaad oo ka tagay Yurub sheegtana in uu madax ka yahay Ogaden Human Rights. Talada loola tagay ayaa waxay ahayd; dhibaato ayaa haysata beesheenii kooxdan aad madaxda u tahay ayaana lagu nacay, qaaraankii aan awal ugu xilanaynayna waa la joojiyey, wax aan maanta ugu sii dhabar adaygno dhibaatadan garan mayno.
Jwxo-shiil, waxaa uu isna soo bandhigtay dhibaato gaar ku ah; waad ogtihiin gurigaygii Ingriiska ee xaaskaygu deganayd ayaan joogi kari waayey, Eritreana waxaan ku joogaa magaca kooxdayda. Hadaba, hadii aan faraha kooxdan ka qaado xagee baad isleedihiin Maxamed Cumar wuu ku noolaan?
In kasta oo ragani ay Jwxo-shiil, u sheegeen in ay xidhiidhka ka jarayaan hantida ay u hayaana ay ka xayiri doonaan. Hadana, wax go,aan ah oo ay isla gaadheen ma aanaan helin, waxayse u egg tahay in ay talo ugula laabteen, arinta garta ah ee uu Jwxo-shiil sheegtay, saddexda nin ayaa ku laabtay meelihii ay ka yimaadeen.
Dhanka kale Jwxo-shiil, ayaa xubnaha kooxdiisa, Intii ayna nimankani imanin Caasmara u sheegay in ay kala aadaan safaro micno daro ah, isaga oo ugu andacooday in xubnahaas uu safarka u kala diray ay beelihoodii joojiyeen qaaraankii.
Maclin Diirane ayaa Qadar in lala kulmo la diiday kolkii dambase si beelnimo ah loola kulmay, wuxuuna cadeeyey in ay kooxdii Jwxo-shiil, ay u dhamaatay. Maxamed Ismaciil Qaaxo ayaa isagu Kanada Axmed Cabdi Xukun tuugaya isaga oo leh, waana lay dhalay waana lay dhaxay dhalashana way i wadaa. Ina Dhuubo ayaa isagu afar Islaamood oo Abaydin haysta, 14 sanona guri ku oodnaa Finland been ugu sheegay.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa muuqoodu ka sii libdhayaa dalalka reer galbeedka, dambiyadii ay ummada ka galeena goor dhaw lagu ciqaabidoonaa.